Filannoon biyyoolessaa Naayjeeriyaa gara boodaatti harkifame - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Filannoon biyyoolessaa Naayjeeriyaa gara boodaatti harkifame
Paartileen Mormitootaa Mufannaa Qaban Ibsachaa Jiru
Naayjeeriyaan biyyoota Aafrikaa bara kana filannoo biyyoolessaa geggeessan keessaa isii takka. Akka karooraa yeroo dheeraa dura baafamee irratti hojjatamaa turetti filannoon biyyaattii Gurraandha 14, 2015 geggeffama ture. Amma garuu guyyaan filannichaa gara Bitootessaa 28itti jijjiirameera. Sababni isaas namoota filannoo irratti hirmaataniif wobii nageenya guutuu kennuun ammatti hindada’amu kan jedhu ta’uu ibsi Boordiin Filannoo Naayjeeriyaa addeessa.
Boordiin Filannoo Naayjeeriyaa gorsa angawoota nageenyaa wobii godhachuudhaan kan guyyaa filannoo geeddaruuf dirqame. Itti gaafatamaan Boordii Filannoo Prof. Attahiru Jega jijjiirraa guyyaatiin wolqabatee dhiibbaan mootummaa irraa isa dhaqqabe kan hinjirre ta’uu eere. Akka dubbii Attahiru Jegatti murtiin kuni kan dabre yaada gorsitoota nageenya irratti hundaayeti. Paartiin biyya bulchaa jiru Pepole’s Democratic Party (PDP) labsicha boordii gammachuun simateera. Labsichi garuu namootaa mooraa mormitootaa jiraniifi taajjabdootaaf kan liqimfamu hintaane. Inumaa garee mormitootaa baay’ee aarseera. Ta’us, paartileen mormitootaa deeggartoonni isaanii jeequmsa kaasuu irraa akka ufqusatan waamicha dhiheessaniiru.
Itti-gaafatamaan paartii All Progressives Congress (APC) John Odigie-Oyegun tankaarfiin boordiin fudhate mufachiisaafi kan guddina dimokraasii biyyattii danquudha jedheera. Ministerri Haajaa Biyya-alaa Ameerikaa John Kery iin guyyaan filannoo kuni jijjiramuun isaa hedduu kan isa mufachiise ta’uu ibse. Itii dabaluudhaanis, ‘Siyaasni dhimma boordii filannootti harka naqachuun waan fudhatama hinqabbne,’ jedhe. Mootummaan dhimma nageenyaa eeruudhaan adeemsa dimokraasii danquun sirrii akka hintaanes dubbate, John Keryiin.
Fialloon biyyoolessaa isa bara kanaa irratti dorgommiin cimaan kan jiru perezidaant Goodluck Jonathan-PDP fi bakka bu’aa paartii APC kan ta’e Muhammadu Buhari jiddutti. Akka yaanni namoota irraa sassaabame argisiisutti garaagarummaan wolmorkitoota kanniin lamaan jidduu jiru dhiphaadha. Ta’us garuu, Muhammadu Buharin waaxiqqoon dursaaa jiraachuu isaafi injifachuu nimala waan jedhutu calaqqisa. Egaa sodaa paartiin mormitu angoo niqabatti jedhu ta’uu hinoolu jedhama kan akka mootummaan harka Boordii Filannootiin guyyaan filannoo akka geeddaramu godhe. Guyyaan boodatti harkifatuun perezidaant Goodluck Jonathanifi paartii isaa PDP nifayyada jedhama.
Sababa Boko Haraamiin wolqabatee Naayjeeriyaa keessa yeroo ammaatti rakkoo nagaafi tasgabbiitu mudhata. Rakkoon kuni irra jireenyaan kan calaqqisu gama kaaba baha biyyattiitti. Bokoo Haraam nannoolee biyyattii gara biroo keessattis, keessumattuu bakka namoonni heddu wolgahanitti, yeroo addaddaatti rukuttaa raawwataa ture. Balaa filattoota irra Bokoo Haraam qaqqabsiisuu malu hiri’suuf woraanni biyyattii naannoo heddu keessatti bobba’ee jira. Filannoon akka nagaafi tasgabbiin geeggeefamu godhuuf ammas yeroon kan isa barbaachisu ta’uu dubbatu angawoonni naga biyyattii.
Previous articleAabbush Zallaqee istuudiyoo fiilmii Finfinnee keessatti bane
Next articleAyvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfatte